Koox ciyaartoy kubada cagta ah oo ku biiray kooxo mucaarad hubaysan (Sawiro) – SBC
Koox ciyaartoy kubada cagta ah oo ku biiray kooxo mucaarad hubaysan (Sawiro)
Posted by editor on June 25, 2011 Comments
Koox ciyaartoy kubada cagta ah oo ka kooban 17 isla markaana qaarkood ku jiraan qaranka wadanka Liibiya ayaa shaaca ka qaaday inay si toos ah ugu biirayaan ayna u taageerayaan kooxaha kacdoonka ka wada dalkaasi ee sida ba’an uga soo horjeeda Mucamar Al-Qadaafi oo wali ku adkeysanaya in uu yahay hogaamiyaha Liibiya.
Ciyaartoydan ayaa waxaa ka mid ah goolyaha xulka qaranka Liibiya Juma Gtat iyo sadex ciyaartoy oo kale waxaa sidoo kale ka mid tababaraha kooxda ugu sareysa magaalada Triboli ee kubada cagta ee lagu magacaabo Al Ahly (Al Ahli) Adel Bin Issa.
Mr Gtat & Mr bin Issa ayaa ku dhawaaqay dhawaan go’aankooda ka dib markii ay habeen hore kulan waqti dheer qaarey ay ku yeeshaan magaalada buuraleyda ah ee ku taal galbeedka Liibiya ee lagu magacaabo Nafusa.
“Waxaan u sheegayaa Col Gaddafi in uu na dhaafo oo uu naga tago oo faraha kala baxo Liibiya, si ayn u abuurno Liibiya xor ah”, sidaasi waxaa yiri Mr Gtat oo ku fadhiyey sariirta hotelka uu degan yahay ayna la joogeen ciyaartoy kale.
Inkastoo talaabadan ay u tahay propaganda kooxaha mucaaradka hadana wiilal kubada cagta ciyaara oo Col.Qadaafi uga baaqaya in uu iska tago ma ahan wax laga filan karo in uu warkooda dhagaha u raariciyo, maadama iyadoo la duqeynayo oo culeys ba’an lagu hayo uu ka doorbidayo in uu dhuumaalayso ku dagaalamayo oo dalka hogaankiisa sii xajisanayo.
Dhinaca kale Mr bin Issa wuxuu geestiisa sheegay in ay u yimaadeen buuraleyda galbeedka Liibiya si u muujiyaan in Liibiya ay mideysan tahay oo ay xor tahay.
“Waxaan rajeynaa in subax uun ku soo tooso Gadaafi oo aan joogin halkaasi” ayuu hadalkiisa ku sii biiriyey Bin Issa.